The Sims4: Discover University (PC) | Net Guide
Home Infotainment Games The Sims4: Discover University (PC)
ဒီတဈပတျမှာ ထှကျရှိလာတာကတော့ နာမညျကြျောဆိုရှယျဂိမျးစီးရီး The Sims4အတှကျ Expansion Pack ဖွဈတဲ့ Discover University ပါ။ ဘဝတဈခုကို ကိုယျကွိုကျတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ ဖနျတီးကိုငျတှယျကစားနိုငျတဲ့ The Sims4ကို 2014 ကတညျးက ပှဲထုတျပေးထားခဲ့တာဖွဈပွီး အခု Discover University ကတော့ 8 ခှမွေောကျ Expansion ဖွဈပါတယျ။ Developer ကတော့ ထုံးစံအတိုငျး The Sims Studio အုပျစုဖွဈပွီး Publisher(s) ကလညျး ယခငျမူပိုငျ နာမညျကြျော Electronic Arts ပါ။
ဒီခှလေေးမှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Sim တှကေို တက်ကသိုလျကြောငျးသားကြောငျးသူတှအေဖွဈ ဖနျတီးခှငျ့ရရှိမှာဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ Life Style တှကေို ပွငျပက တကယျ့လူနမှေုဘဝပုံစံမြိုးတှေ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ယခငျထှကျခဲ့သမြှထဲက The Sims 2: University, The Sims 3: University Life, The Sims 2: Open for Business, The Sims 2: Apartment Life, The Sims 3: Ambitions, The Sims 3: Into the Future တို့ရဲ့ Themes တှေ၊ Elements တှကေို ဒီဂိမျးလေးမှာ ပွနျလညျမွငျတှရေ့မှာဖွဈပွီး သမိုငျးဝငျတက်ကသိုလျ University of Britechester ရဲ့ ကြောငျးသားတဈဦးအဖွဈ စတငျရမှာပါ။
Campus ကို University of Britechester နဲ့ Foxbury Institute ဆိုပွီး Arts ပိုငျးနဲ့ Science ပိုငျး ဝိဇ်ဇာ/သိပ်ပံတှနေဲ့ သကျမှေးပိုငျး2ပိုငျး ခှဲပေးထားတာ တှရေ့ပါမယျ။ ကြောငျးသားတှရေဲ့ ဘဝပုံစံတှဖွေဈတဲ့ စာသငျရတာတှေ၊ Study လုပျရတာတှေ၊ ကွိုဆိုပှဲ၊ နှုတျဆကျပှဲတှေ၊ အားကစားပှဲတှေ၊ ရာသီအလိုကျပှဲတျောတှေ၊ စာမေးပှဲတှေ၊ စာတမျးဖတျပှဲတှေ၊ စကားရညျလုပှဲတှေ၊ သိပ်ပံပွပှဲပွိုငျပှဲတှေ အစရှိတဲ့ Gameplay တှအေားလုံး ဆော့ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယခငျ Features တှအေပွငျ Object သဈတှအေနနေဲ့ တဈဦးခငျြးရခြေိုးခနျးတှေ၊ ဘုံရခြေိုးကနျ၊ မီနီရခေဲသတ်ေတာ၊ အအေးပုံး၊ ကျောဖီဆိုငျ၊ တငျးနဈစားပှဲ၊ ဘောလုံး အစရှိတာတှေ ပါဝငျလာမှာဖွဈသလို New Careers တှအေဖွဈ Education, Engineer, E-Sports Competitor, Law, Soccer Team Player ဆိုပွီး ထညျ့သှငျးပေးထားမှာပါ။
Features သဈတှအေနနေဲ့ကတော့ Facial piercings, Minimalistic tattoos, Repo-menu, Roommates, Scholarships, Secret society, Shower WooHoo, Skill classes, Student loans, Student organizations စတာတှေ ပါဝငျမှာဖွဈပွီး နောကျခံ Music ပိုငျးအနနေဲ့ Faboo Lorb – butter, Onset – Haiku Hands feat. Mad Zach, Dollar – Electric Guest, Charlie – Mallrat, Millie Turner – Ride This Train စတဲ့ မွူးကွှတဲ့ သံစဉျတှနေဲ့ သှကျသှကျလကျလကျ ဆော့ကစားခှငျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဂိမျးလေးကို ကစားမယျဆိုရငျတော့ OS : Windows7(SP1), Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10 64 bit, CPU : 1.8 GHz Intel Core2Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ or equivalent, RAM :4GB, HDD : 15 GB, VIDEO : 128 MB of NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500 အနညျးဆုံး လိုအပျမှာပါ။ ၀ယျယူမယျဆိုရငျတော့ အမွို့မွို့အနယျနယျတိုငျးက Excellent Softwares & Games ဆိုငျတိုငျးမှာ The Sims4: Discover University အခှလေေးကို ရရှိနိုငျပွီဖွဈတဲ့အကွောငျး သတငျးကောငျးလေး ပေးလိုကျရပါတယျ။
ဒီတစ်ပတ်မှာ ထွက်ရှိလာတာကတော့ နာမည်ကျော်ဆိုရှယ်ဂိမ်းစီးရီး The Sims4အတွက် Expansion Pack ဖြစ်တဲ့ Discover University ပါ။ ဘ၀တစ်ခုကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖန်တီးကိုင်တွယ်ကစားနိုင်တဲ့ The Sims4ကို 2014 ကတည်းက ပွဲထုတ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု Discover University ကတော့ 8 ခွေမြောက် Expansion ဖြစ်ပါတယ်။ Developer ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း The Sims Studio အုပ်စုဖြစ်ပြီး Publisher(s) ကလည်း ယခင်မူပိုင် နာမည်ကျော် Electronic Arts ပါ။
ဒီခွေလေးမှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Sim တွေကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအဖြစ် ဖန်တီးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ Life Style တွေကို ပြင်ပက တကယ့်လူနေမှုဘ၀ပုံစံမျိုးတွေ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ထွက်ခဲ့သမျှထဲက The Sims 2: University, The Sims 3: University Life, The Sims 2: Open for Business, The Sims 2: Apartment Life, The Sims 3: Ambitions, The Sims 3: Into the Future တို့ရဲ့ Themes တွေ၊ Elements တွေကို ဒီဂိမ်းလေးမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သမိုင်းဝင်တက္ကသိုလ် University of Britechester ရဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် စတင်ရမှာပါ။
Campus ကို University of Britechester နဲ့ Foxbury Institute ဆိုပြီး Arts ပိုင်းနဲ့ Science ပိုင်း ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတွေနဲ့ သက်မွေးပိုင်း2ပိုင်း ခွဲပေးထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့ စာသင်ရတာတွေ၊ Study လုပ်ရတာတွေ၊ ကြိုဆိုပွဲ၊ နှုတ်ဆက်ပွဲတွေ၊ အားကစားပွဲတွေ၊ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်တွေ၊ စာမေးပွဲတွေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ၊ စကားရည်လုပွဲတွေ၊ သိပ္ပံပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေ အစရှိတဲ့ Gameplay တွေအားလုံး ဆော့ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် Features တွေအပြင် Object သစ်တွေအနေနဲ့ တစ်ဦးချင်းရေချိုးခန်းတွေ၊ ဘုံရေချိုးကန်၊ မီနီရေခဲသေတ္တာ၊ အအေးပုံး၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ တင်းနစ်စားပွဲ၊ ဘောလုံး အစရှိတာတွေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်သလို New Careers တွေအဖြစ် Education, Engineer, E-Sports Competitor, Law, Soccer Team Player ဆိုပြီး ထည့်သွင်းပေးထားမှာပါ။
Features သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ Facial piercings, Minimalistic tattoos, Repo-menu, Roommates, Scholarships, Secret society, Shower WooHoo, Skill classes, Student loans, Student organizations စတာတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး နောက်ခံ Music ပိုင်းအနေနဲ့ Faboo Lorb – butter, Onset – Haiku Hands feat. Mad Zach, Dollar – Electric Guest, Charlie – Mallrat, Millie Turner – Ride This Train စတဲ့ မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် ဆော့ကစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းလေးကို ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ OS : Windows7(SP1), Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10 64 bit, CPU : 1.8 GHz Intel Core2Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ or equivalent, RAM :4GB, HDD : 15 GB, VIDEO : 128 MB of NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500 အနည်းဆုံး လိုအပ်မှာပါ။ ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းက Excellent Softwares & Games ဆိုင်တိုင်းမှာ The Sims4: Discover University အခွေလေးကို ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Next articleCrayon Icon Pack